Ii-hyperlink ezonakeleyo kwiLizwi nakwi-Excel > UVielhuber uDavid
Ii-hyperlink ezonakeleyo kwiLizwi nakwi-Excel06
Umntu unokucinga ukuba xa ii-hyperlink zivulwa kuxwebhu lweLizwi / lwe-Excel, umkhangeli osemgangathweni uqalwa nge-URL efunwayo. Okumangalisa ngokwaneleyo kukuba, oku akunjalo- okukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga kwaye kwenza amakhonkco eseshini / asekwe ngecookie-akhuselwe kumaphepha akhuselweyo kwiinkqubo zeofisi ukuba akunakwenzeka.
Oku kungenxa yemodyuli ebizwa ngokuba yi "Arhente yoMsebenzisi: UkuFunyanwa kweOfisi kaMicrosoft Office" kaMicrosoft, ethi ilayishe ikhonkco ngasemva kwaye ilandelele naluphi na uhlengahlengiso. Ingxaki inokuphinda iveliswe ngolu hlobo lulandelayo: Kuqala wenza iifayile ezimbini ezibizwa ngokuba yi "loggedin.php" (iphepha kwindawo yokungena) kunye ne "login.php" (iphepha lokungena):
Emva kokubiza "loggedin.php" ngqo, ufika ngqo ku "login.php" kwindawo yoqobo, apho icookie "logged_in" icwangciswe ngoko nangoko. Emva kokubiza "loggedin.php" kwakhona, ufumana umyalezo "ungene in ". Ukuba uqhagamshela ku" loggedin.php "ngaphakathi kweLizwi okanye i-Excel (inguqulelo ka-2007 okanye kamva), uhlala usiya ngqo ku-" login.php ", nokuba sele ungene okanye awungenanga.
Iinkqubo zeOfisi ziqala icandelo leInternet Explorer ngasemva ukujonga ukuba ikhona i-URL. Naluphi na uhlengahlengiso lukwalandelwa ukuya esiphelweni kunye ne-URL yokugqibela ngaphandle kokuphinda ubhekise kuyo (kwimeko yethu "login.php") iyabuyiselwa kwaye ibizwe ngesikhangeli esisezantsi.: